မွေးနေ့မှာ နံနနက်ခင်ကနေစလို့ ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ် - Cele Gabar
မွေးနေ့မှာ နံနနက်ခင်ကနေစလို့ ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့တဲ့ မေမြင့်မိုရ်
ပရိသတ်ကြီးရေ မေမြင့်မိုရ်ကတော့ ရုပ်သံဇာတ်လမ်းတွဲတွေမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ရာကနေ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကို အပြည့်အဝရရှိထားပြီး ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးတွေမှာပါ ပါဝင် သရုပ်ဆောင်နေတဲ့ အထိအောင်မြင်မှုတွေရရှိနေတဲ့ ပရိသတ်အချစ်တော်စ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ မေလ (၁၁)ရက်နေ့လေးကတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ အချစ်တော် မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနေ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာတော့ မေမြင့်မိုရ်က အသက် (၂၇)နှစ်ပြည့်မြောက်သွားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မေမြင့်မိုရ်ကတော့ ဒီနေ့သူ့ရဲ့မွေးနေ့ရက်မြတ်လေးမှာ နံနက်ခင်းကနေစလို့ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်ပြီး ဖြတ်သန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေလည်း မွေးနေ့နံနက်ခင်းလေးမှာ တန်းဆွမ်လောင်းလှူကုသိုလ်ပြုနေခဲ့ပုံလေးတွေကိုလည်း မျှဝေထားခဲ့ပါသေးတယ်။
Happy Birthday ပါ မေလေးရေ……. မွေးနေ့မှာ စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာပြီး အနုပညာလောကမှာ ပိုမိုအောင်မြင်မှုတွေရရှိပါစေ ပရိသတ်တွေရဲ့ ချစ်ခင်မှုကိုလည်း ပိုမိုရရှိပါစေလို့ CeleGabar ကနေ မွေးနေ့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ CeleGabar ပရိသတ်ကြီးရေ မေမြင့်မိုရ်ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် မွေးနေ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခဲ့ကြပါဦးနော်။
Source – May Myint Mo
ေမြးေန႔မွာ နံနနက္ခင္ကေနစလို႔ ေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ေနခဲ့တဲ့ ေမျမင့္မိုရ္
ပရိသတ္ႀကီးေရ ေမျမင့္မိုရ္ကေတာ့ ႐ုပ္သံဇာတ္လမ္းတြဲေတြမွာ ပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ခဲ့ရာကေန ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကို အျပည့္အဝရရွိထားၿပီး ႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားႀကီးေတြမွာပါ ပါဝင္ သ႐ုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အထိေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိေနတဲ့ ပရိသတ္အခ်စ္ေတာ္စ္ေယာက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေန႔ ေမလ (၁၁)ရက္ေန႔ေလးကေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ေတာ္ ေမျမင့္မိုရ္ရဲ႕ ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဒီေန႔ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာေတာ့ ေမျမင့္မိုရ္က အသက္ (၂၇)ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္သြားခဲ့တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေမျမင့္မိုရ္ကေတာ့ ဒီေန႔သူ႔ရဲ႕ေမြးေန႔ရက္ျမတ္ေလးမွာ နံနက္ခင္းကေနစလို႔ေကာင္းမႈေတြျပဳလုပ္ၿပီး ျဖတ္သန္းေနခဲ့ပါတယ္။သူ႕ရဲ႕လူမႈကြန္ရက္စာမ်က္နွာကေနလည္း ေမြးေန႔နံနက္ခင္းေလးမွာ တန္းဆြမ္ေလာင္းလွဴကုသိုလ္ျပဳေနခဲ့ပံုေလးေတြကိုလည္း မွ်ေဝထားခဲ့ပါေသးတယ္။
Happy Birthday ပါ ေမေလးေရ……. ေမြးေန႔မွာ စိတ္ခ်မ္းသာကိုယ္က်န္းမာျပီး အနုပညာေလာကမွာ ပိုမိုေအာင္ျမင္မႈေတြရရွိပါေစ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ ခ်စ္ခင္မႈကိုလည္း ပိုမိုရရွိပါေစလို႕ CeleGabar ကေန ေမြးေန႕ဆုေတာင္းေပးလိုက္ပါတယ္။ CeleGabar ပရိသတ္ၾကီးေရ ေမျမင့္မိုရ္ရဲ႕ ေမြးေန႔အတြက္ ေမြးေန႔ဆုမြန္ကောင္းေတာင္းေပးခဲ့ၾကပါဦးေနာ္။
Previous post ဒရမ်မာဇာတ်ကားအသစ်မှာ ပရိသတ်တွေမမြင်ဖူးသေးတဲ့ပုံစံအသစ်နဲ့တွေ့မြင်ရတဲ့ Ji Chang Wook
Next post အင်ဒိုနီးရှားကနာမည်ကြီး Youtuber တစ်ယောက်ကတောင် Reaction Vedio လုပ်ရတဲ့ အထိကို အောင်မြင်မှုတွေရရှိခဲ့တဲ့ ဝီလျှံထွန်းရဲ့သီချင်းလေး